Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi » Know Your MPs (Test Page) – Kalfadhi
Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi » Know Your MPs (Test Page)
Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi
Xildhibaan Golaha Shacabka Wuxuu ku dhashay Muqdisho – 1971-kii Deegaan-doorasho: Galmudug Waxaa lagu doortay Cadaado, 28 Nofeembar 2016 Xilal hore: Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Suudaan, 2010-211 home
Axmed Macallin Fiqi Axmed oo ka mid ah xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya, wuxuu ku dhashay Muqdisho labadii Abriil 1971. Deegaan-doorashadiisa waa Galmudug. Doorasho 28-kii Nofeembar, 2016 ka dhacday magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa xildhibaan loogu doortay.
Waxbarashada iyo takhasuska
Dugsiga hoose ee Waaberi ayuu ku biiray 1977. Wuxuu ka baxay dugsigii dhexe ee Sheekh Suufi sanadkii 1984-kii, isagoo 1988 ka baxay dugsigii saree e KPP. Isla sanadkaas wuxuu qeyb ka noqday shaqadii gurmadka qaranka oo xilligaas muddo labo sano ah ay khasab ku ahayd arday kasta oo dhameeya dugsiga sare.
Bishii Luulyo ee sanadkii 1990 ayuu u fadhiistay imtixaanka qabashada ardayda cusub ee Jaamacadda Umadda. Waxaa loo oggolaaday inuu ku biiro kulliyadda sharciga laakiin isagoo sanadkii koowaad baranaya af-Talyaani ayuu billowday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya.
Dalka Suudaan oo uu tagay sanadkii 1991 ayuu sanad kaddib ka billaabay waxbarashada jaamacadda. Sanadkii 1997-kii oo ay ahayd inuu dhammeeyo kulliyadda beeraha ee jaamacadda Khartuum oo uu dhiganayay ayuu dagaal ka qarxay dalkaas, laakiin taas ma saameynin waxbarashadiisii oo waxaa u suuragashay inuu jaamacadda dhameeyo 1998.
Isla sanadkaas uu qalinjebiyay ayuu dib ugu soo noqday Soomaaliya. Wuxuu isku howlgalay ka qeyb qaadashada dib-u-soo-celinta hannaankii waxbarasho ee dalka ee uu saameeyay burburka. Wuxuu wax ka aasaasay dugsiyo waxbarasho oo laga hirgeliyay Muqdisho.
Sanadkii 2007 ayuu mar kale dalka dibaddiisa u aaday waxbarasho. Wuxuu shahaadada heerka labaad ka diyaariyay jaamacadda IIUM oo uu ka diyaariyay cilmiga maamulka.
Xilalka uu soo qabtay
Sanadkii 2010 ilaa qayb ka mid ah 2011 wuxuu noqday danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Suudaan. Bartamihii sanadkii 2011 waxaa loo magacaabay taliyaha hay’adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka, wuxuuna xilkaas hayay ilaa 2013.
Fiqi iyo siyaasadda
Xildhibaanka ayaa Kalfadhi u sheegay in ku soo laabashadiisii dalka uu uga faa’ideystay inuu u dhaqdhaqaaqo nabadda iyo dib-u-heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed. Khilaafka iyo colaadaha waxaa la aaminsan yahay inay salka ku hayaan siyaasadda.
Wuxuu sanadkii 2015 u tartamay madaxwaynaha maamulka Galmugud, waxaana doorashadaas sagaal cod oo keliya uga guuleystay Cabdikariim Xuseen Guuleed oo helay 49 cod.